राष्ट्रसंघीय बैठकलाई आज राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्दै, अरु के के छन् कार्यक्रम ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
राष्ट्रसंघीय बैठकलाई आज राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्दै, अरु के के छन् कार्यक्रम ?
काठमाडौं । न्यूयोर्क भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (सीएसडब्ल्यु) को ६३ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनले महिलाको स्थिति सम्बन्धमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रसंघीय महासभाका अध्यक्ष मारिया फर्नाण्डा इस्पिनोसा ग्रेसेसले आयोजना गर्ने ‘शक्तिमा नारी’ विषयको उच्चस्तरीय बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्न लागेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारी ‘महिला नेतृत्वले कसरी विश्व परिवर्तन गर्न सक्छ’ भन्ने विषयमा हुने उच्चस्तरीय राउण्ड टेबल कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ ।
अमेरिका भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीसँग राष्ट्रसंघको सचिवालयमा महासचिव एण्टोनियो गुटरेस र अध्यक्ष ग्रेसेसले शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । भण्डारीले मंगलबार साँझ स्टोनियाका राष्ट्रपति क्रोयसियाका राष्ट्रपति र ट्रिनिनिडाडा एण्ड टोबाकोका राष्ट्रपतिसँग पनि भेटवार्ता हुनेछ । राष्ट्रपति भण्डारी नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चैत १ गते काठमाडौं आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।